गुगलमा ‘ट्वाइलेट पेपर’ खोज्दा किन आउँछ पाकिस्तानको झण्डा ? - Dainik Nepal
गुगलमा ‘ट्वाइलेट पेपर’ खोज्दा किन आउँछ पाकिस्तानको झण्डा ?
दैनिक नेपाल २०७५ फागुन ७ गते १५:४७
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय ‘सर्च बक्स’ मानिने गुगल वेलावेलामा विभिन्न कारण चर्चामा आउने गर्छ । यस्तै पछिल्लो समय गुगलमा ‘ट्वाइलेट पेपर’ खोज्दा पाकिस्तानको झण्डा आएको विषयले चर्चा पाएको छ । गुगलमा “best toilet paper in the world” लेखेर खोज्यो भने टप स्टोरिज मै आउँछ पाकिस्ताको झण्डा जोडिएको फोटो र यस्तै खालका स्टोरिजहरु । यदि पत्यार लाग्दैन भने तपाईंले पनि भरखरै खोेजेर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
आखिर किन आउँछ यस्तो ?
गुगलमा ‘ट्वाइलेट पेपर’ खोज्दा पाकिस्तानको झण्डा जोडिएको फोटो तथा पोष्टहरु आउनुको कारण भने भारत प्रशासित काश्मिरमा आक्रमणको जवाफमा अभिनय गर्नेहरुलाई देखाइएको छ । जुन आक्रमणमा ४० जनाको मृत्यु भएको थियो ।
यो भारतीय शासनको विरुद्ध विद्रोहपछि कश्मिरमा भारतीय सेनामा भएको सबै भन्दा ठूलो आतंकवादी हमला थियो । पाकिस्तानमा इस्लामवादी समूह जयश–ई–मोहम्मदले उक्त आक्रमणकोपछि त्यस्तो अभिनय भएको बताए ।
त्यसपछि पाकिस्तानको झण्डा जोडेर ट्वाइलेट पेपरहरु राखिएका लेखहरु बढि आउन थालेका हुन् । गुगलले कसरी परिणाम फर्काउँछ भन्ने कुराले त्यस्तो जडानको खोजी गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या पनि प्रभावकारी हुन सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
त्यतिवेला चर्चामा आएको त्यो कुरा कतिपयले धेरैको संख्यामा सोसल मिडियामा राखे । पछि धेरै हेरिएका ती कुराहरुलाई गुगलले प्राथमिकतामा राख्यो । गुगलले त्यतिवेलाका स्क्रिन सटहरु पनि देखाउने गरेको छ ।
तर गुगलले हालसम्म यो कसरी भइरहेको छ भनेर केही पनि खुलाएको छैन । गुगगले मानिसहरुमा जिज्ञासा बढ्ने खालको परिणामा देखाएको यो पहिलो पटक भने होइन । -एजेन्सीको सहयोगमा
स्याण्डविचका कारणा वेटरकाे हत्या
हर्कत गरेर विमान उडाउन खाेज्ने दुई पाइलट पक्राउ